Uyenza njani iReel kwi-Instagram | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 18/10/2021 20:00 | Ukuhlaziywa ukuba 18/10/2021 20:10 | I intanethi
I-Instagram ithatha ixesha elide kunye nefomathi entsha yokupapashwa, oko kukuthi, iiRels. Ekuqaleni babelovavanyo kodwa lwamkelwa kakuhle, kangangokuba luye lwagcinwa ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo, baninzi abangakaziyo Uyenza njani iReel kwi-Instagram.
Ukuba le yimeko yakho, okanye uyazenza kodwa awufumani ziphumo ekufuneka uzenzile, nazi izitshixo ukuze wazi, kungekuphela indlela yokwenza, kodwa indlela yokwenza ngendlela yobungcali ukuze uphumelele . Ziphose kuyo?
1 Yintoni iReel ye-Instagram
2 Yintoni ekufuneka uyigcinile engqondweni ngaphambi kokwenza iReel
3 Ziphi ii reels ezibonwayo
4 Uyenza njani iReel kwi-Instagram inyathelo ngenyathelo
5 Ngaba kungabelwana ngazo?
Yintoni iReel ye-Instagram
Okokuqala, kufuneka uyazi ngokuthe ngqo ukuba sibhekisa phi kwiRel. Ezi zizithuba kwifomathi yevidiyo engapheli phakathi kwemizuzwana eli-15 ukuya kwengama-30. Ezi vidiyo zinokupapashwa zihleliwe, oko kukuthi, i-Instagram ikuvumela ukuba wandise okanye unciphise isantya, ukongeza isicatshulwa, umculo, izihluzi, izandi okanye iziphumo.
Ixesha elininzi olichithayo, kokukhona kuya kwenziwa ngcono.
Esi sixhobo imi emazantsi kwikhamera ye-Instagram kwaye ikuvumela ukuba ufikelele kumaqhosha okuhlela ahlukeneyo ukwenza ubuqu kwaye, ngaphezu kwako konke, umgangatho weReel. Phakathi kwala maqhosha unesandi, ukukhangela umculo; Iziphumo ze-AR, ukudubula ngobuchule bokwenza okuthile; ixesha kunye nokubala ixesha; ulungelelwaniso kunye nesantya.
Ukongeza, ividiyo akufuneki ukuba irekhodwe kwikliphu enye, zinokudityaniswa zonke zize zihlelwe.
Yintoni ekufuneka uyigcinile engqondweni ngaphambi kokwenza iReel
Khawufane ucinge ukuba uza kwenza ividiyo ngaphambi kokuba uyenze ngqo kwi-Instagram. Kuqhelekile, ngakumbi ezivenkileni okanye kwiinkampani ezifuna into ethe kratya ngakumbi. Ewe, kuya kufuneka uyazi ukuba isisombululo esinconywayo sisisombululo se-pixels eziyi-1080 × 1920. Kwaye umlinganiso wento ubhetele kune-9: 16.
Ukongeza, kuya kufuneka uthathele ingqalelo oku kulandelayo:
Awuyi kuba nakho ukongeza iifoto. Ukuba ufuna ukubeka iifoto kuya kuba yinto eqhelekileyo. Iireels zeevidiyo kuphela.
Ngokuphathelele ii-hashtag, unokongeza kuphela ezingama-30. Lumka, kuba ukuba ubeka ngaphezulu, ekuphela kwento oya kuyifumana kukuba ithathwa njenge-SPAM kwaye inokuba semngciphekweni weakhawunti yakho.
El Isicatshulwa esihamba kunye neReel asinakugqitha oonobumba abangama-2200. Yimalunga nama-350-400 amagama okanye njalo.
Sikwacebisa ukuba ucwangcise kwangaphambili. Ngale ndlela iya kuba ngcono kakhulu. Abanye bacinga ukuba indalo ilunge, kwaye iyinyani. Kodwa kweziphi iimeko. Ukuba iakhawunti yeyeshishini okanye ivenkile yobungcali, ngamanye amaxesha ukunika olo luvo locwangco kunye nocwangciso kunceda abathengi bakuthembe ngokuthenga kwabo. Kodwa ukuba babona isiphithiphithi kwimidiya yoluntu banokulumka. Ngaphandle kwalonto ayizukujongeka njenge "ntetho" kwabanye abalandeli abatsha.
Ziphi ii reels ezibonwayo
Ukongeza ekwenzeni nokuzipapasha, yazi ukuba ungazibona kwakhona ii-Instagram Reels, zombini ezakho nezabahlobo bakho.
Ukwenza oku, kuya kufuneka yiya kwicandelo lokuHlola kwaye apho uya kufumana ezona vidiyo zintle. Baya kuhlala bephuma kwifomathi yomfanekiso kwaye ungathanda, wabelane okanye ubeke izimvo kuyo.
Ukuba unethamsanqa elaneleyo lokuba uvele 'Okubonisiweyo' ngcono kakhulu, kuba uya kufumana ukubonakala ngakumbi. Kodwa ukufezekisa oku, kuya kufuneka ukuba uthathele ingqalelo onke amanyathelo ekufuneka ethathiwe ukwenza iReel kwi-Instagram
Uyenza njani iReel kwi-Instagram inyathelo ngenyathelo
Ngoku, masibone ukuba ungayenza njani iReel kwi-Instagram ukusuka ekuqaleni. Yayo, amanyathelo ekufuneka uwathathile Zizo zilandelayo:
Vula usetyenziso lwe-Instagram. Ukuba ujonga ngokusondeleyo, ikhamera ivela phezulu ecaleni kwegama le-Instagram. Cofa apho.
Ngoku, kuya kufuneka ukhethe apha ngezantsi into ofuna ukuyenza, ukuba uboniswa ngqo, ibali okanye, yintoni ebalulekileyo kuthi ngoku, iRel.
Ngaphambi kokuba uqale ukurekhoda unokongeza iaudiyo, oko kukuthi, ingoma enokudlala ngelixa ividiyo yakho irekhodwa. Unenjini yokukhangela ukufumana leyo uyifunayo. Ewe uyakhumbula ukuba iireels yimizuzwana eyi-15-30 kuphela? Ewe, kufuneka usike inxalenye yaloo ngoma.
Iqhosha elilandelayo liqhosha lesantya sevidiyo, ukuba ufuna ukuba lirekhodwe ngesantya esiqhelekileyo okanye ngokukhawuleza.
Nazi iziphumo. Kule meko, i-Instagram ikunika ithuba lokubeka iziphumo okanye amacebo okucoca ulwelo, kuxhomekeka kwinto oyifunayo. Ungazijonga kuqala ngaphambi kokuba uzamkele ukuze wazi ukuba ufuna ukurekhoda njani ukuba ingabonakala njani.
Okokugqibela, kuya kufuneka usete ubude bevidiyo. Kwakhona eli qhosha linceda ukuseta ixesha, oko kukuthi, ukwazi ukuba liza kuqala nini ukurekhoda kwaye liphele nini.
Umqondiso wokuqala uya kuba bubude bevidiyo. Kwaye emva koko iqhosha liya kukuvumela ukuba usete ixesha.
Ngoku kufuneka uqale ngokurekhoda kwaye, wakuba ugqibile, ungabelana ngayo eludongeni kunye / okanye Jonga, ukhetho lwezithuba ze-Instagram (iya kukunika abaphulaphuli ngakumbi ukuba iyaphuma).
Ngaba kungabelwana ngazo?
Ngoku uyenzile iReel yakho, kwaye uyipapashile, kodwa kuthekani ukuba ufuna ukwabelana ngayo nenye iakhawunti ye-Instagram? Okanye ngaba abahlobo bakho babelana ngayo? Inga?
Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba indlela owabelana ngayo (kuba unako) iya kuxhomekeka ikakhulu kuseto lwabucala onalo, oko kukuthi, nokuba iakhawunti yakho yeyasesidlangalaleni okanye yabucala.
Ukuba yeyasesidlangalaleni, Kwi-Explora unendawo apho unokubona iiReels zabasebenzisi be-Instagram kwaye ungabelana ngayo nabalandeli bakho kanye epapashiweyo kwisondlo. Ngoku, ukuba iakhawunti yakho iyimfihlo, ungabelana ngayo kwi-feed, kodwa abasebenzisi abazukukwazi ukuyabelana nabanye abalandeli kuba njengoko ingumxholo "wabucala", kufuneka babe ngabalandeli bakho ukuze bayibone kuqala.
Kwaye yenziwa njani? Oku kuya kunikwa kuwe phantse esiphelweni sokwenza iReel yakho. Kwisikrini sokwabelana, kuyakufuneka ugcine uyilo kwaye sikucebisa ukuba utshintshe umfanekiso wekhava ube ngowulungele ividiyo yakho. Yinike isihloko kunye nee-hashtag. Okokugqibela, thepha abantu obafunayo.
Kuya kufuneka ubonise kuphela ukuba kwabelwane ngayo kwi-Explore kunye nakwi-feed ukuze kwabelwane ngayo ngabalandeli.
Ngaba sele icacile kuwe indlela yokwenza iReel kwi-Instagram? Ukuba unemibuzo, sazise kwaye siya kuzama ukukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I intanethi » Uyenza njani iReel kwi-Instagram